भोलि देखि निस्कासन हुदै दोर्दी खोलाको आईपीओ , कति दिने आवेदन ?
बिहिबार, जेठ ०५, २०७९
स्थापित र सिंहको भोट जोड्दा पनि बालेनको भोट धेरै
विजय सुवेदीलाई फराकिलो मतले पछि पार्दै रेनु दाहाल
उपचारको क्रममा देउवाको निधन , कांग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त ।
यी हुन एकै मतले बाजी मार्ने विजयी उम्मेदवारहरु
भरतपुरमा रेनु दाहालको अग्रता कायमै ।
मुसिकोटको मेयर उपमेयरमा एमालेको सानदार जित ।
गुल्मीमा काङ्ग्रेसकी २६ बर्षिय कुवर उपाध्यक्ष्मा निर्वाचित
भरतपुरमा फेरि रेनु दाहाल अगाडी ।
गुल्मीको मालिकामा एमाले निल ,वडासदस्य समेत जित्न सकेन !
मेरो एक भोट बिक्रीमा छ।
अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिकले आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट पायो अनुमति
आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी !
प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्काशन गर्दै हाथवे इन्भेष्टमेन्ट।
ग्रीन भेन्चर्सको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयरमूल्यमा भारि गिरावट
आजदेखि खुल्यो बिन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावरको आइपीओ , कति दिने आवेदन ?
निष्कासन भएको ११ दिनसम्म जम्मा १६ सय जनाले भरे रिभर फल्सको आईपीओ !
रिभर फल्स पावरको आईपीओ निष्कासन मिति सार्बजनिक , कति दिने आवेदन ?
तेह्रथुम पावर पछी कुन कम्पनीको आइपियो भर्न पाहिएला ? जान्नुहोस !
जलविद्युत्लाई हकप्रद निष्कासन गर्न कडाइ
तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपीओ बाँडफाँट , कसरि हेर्ने नतिजा ?
सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब ७० अंकले घट्यो
यी हुन सम्पूर्ण लगानीकर्ताले जान्नैपर्ने कुराहरु , परिभाषा सहित।
राष्ट्र बैंकले भन्यो : क्रिप्टोकरेन्सी र जोसिएल जस्ता नेटवर्क मार्केटिङको कारोबार गर्नेलाई कारबाही हुन्छ
आज देखि निस्कासन भयो ९० करोडको आईपीओ , कति दिने आवेदन ?
मध्य भोटेकोशीको आईपीओ बाँडफाँट मिति सार्बजनिक , तपाईलाई पर्ने सम्भावना कति ?
नेप्से आईपीओ राशिफल शेयर बजार एमसीसी एमाले महाधिवेशन राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सुन
सोमबार, बैशाख १२, २०७९ मा प्रकाशित
दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले वैशाख १३ गतेदेखि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दाहरुका लागि जारी पूँजी १ अर्ब ५ करोड ४२ लाख ६० हजार ४०० को १० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यका कुल १० लाख ५४ हजार २६० कित्ता आईपीओ विक्री गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि रू. २९ करोड ५१ लाख ९२ हजार ९०० बराबरको २९ लाख ५१ हजार ९२९ कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय सहित सर्वसाधारणमा २८ प्रतिशत शेयर जारी गर्न लागेको हो ।
कम्पनीको शेयर विक्री प्रबन्धमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने हाल संस्थापकतर्फबाट कम्पनीले चुक्ता गरेको ७२ प्रतिशत पुँजी रू. ७५ करोड ९० लाख ६७ हजार ५०० रहेको छ । आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतममा १० लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीले लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुका (साविकको भारते,अर्चलबोट, श्रीभञ्ज्ङ, नौथर पाचोक, ढोडेनी, फलेनी, बन्सार र हिलेटक्सार (१–८) गा.वि.स) लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।
कम्पनीको आईपीओमा स्थानीयले छिटोमा वैशाख २७ गतेसम्म यो आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने भने ढिलोमा जेठ ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। इक्रा नेपालले कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा एनपी आईआर डबल बी माइनश रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
22343 5
स्रोत खुलाइएको बाहेक अन्य लेखहरुको सर्बाधिकार अविलास मिडिया प्रा. लि. संग सुरक्षित रहेको हुदा नेप्से बजार डटकममा प्रकाशित समाचार लिखित अनुमति विना पुन प्रकासन गर्न मनाही छ। यदि यस्तो गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुनेछौं ।
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्
सङ्खुवासभाको सभापोखरीमा गठबन्धन विजयी
एमालेको पकड क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका २४ बर्षिय रमेश भारी मतले विजयी
यस्तो छ मुसिकोटमा मेयरको मतगणनाको पछिल्लो उपडेट ।
मुसिकोटको ३ वडाको नतिजा सार्बजनिक , कुन वडामा कस्ले मार्यो बाजि ? जान्नुहोस
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ।
गुल्मीको मुसिकोटका ३ वटै वडामा काङ्ग्रेस बिजयी
एमालेको बिजय र्‍यालीमा सरकारी बाईकको प्रयोग
मतदान चलिरहदा विदेशीन लागेकाहरु ।
मुसिकोट वडा नम्बर ८ को नतिजा सार्बजनिक । कसले जित्यो जान्नुहोस
हाल सम्म मुसिकोटको मेयर र उपमेयरमा कसले कति मत पाए ? पछिल्लो उपडेट ।
Tweets by NepseBajar
Redmi Note 11 SD 680
New Launch | Order Now
१. धितोपत्र र शेयरमा के फरक छ ? जान्नुहोस
२. आफु संग भएको शेयर किन्दा र बेच्दा कति ब्रोकर कमिसन तिर्नु पर्छ ? जान्नुहोस
३. कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दा घाटा हुदैन ? कम्पनी छनोट कसरि गर्ने ? जान्नुहोस।
४. लगानी विविधिकरण कसरि गर्ने ? कस्तो शेयरमा कम जोखिम हुन्छ , जान्नुहोस
५. लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? जान्नुहोस
Abilash Media Pvt. Ltd.
Bharatpur–4 , Lanku,Chitwan
सूचना विभाग दर्ता नम्बर:२८३१ -२०७८/७९
कम्पनी दर्ता नम्बर : २६७१९८/०७८/०७९
Editor : Ujjwal Khanal
Reporter : Janak Kafle
Reporter : Sudip Chapagain
Right Share Adjustment
Bonus Share Adjustment
प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ /२०७८ अविलास मिडिया प्रा. लि. । सर्वाधिकार सुरक्षीत
Website By Lumbini Host
ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ कमेन्ट सर्च